warkii.com » “Waa Habar Duqowday Oo Ka Maseersan Gabdhaha 21 Jiryaalka Ah” Ajay Devgn Oo U Jawaab Celiyay Raveena Tandon Kadib Markee Howshiisa Faraha La Gashay!!
“Waa Habar Duqowday Oo Ka Maseersan Gabdhaha 21 Jiryaalka Ah” Ajay Devgn Oo U Jawaab Celiyay Raveena Tandon Kadib Markee Howshiisa Faraha La Gashay!!
Atiriishada Raveena Tandon ayaa wax laga weydiiyay hadii ay xiiso u qabto loolana kujirto sidee boos oga heli laheed dib u sameeynta Filimka Andaz Apna Apna kaaso la daawaday 1994 sido kalena ay wada jileen Aamir Khan, Salman Khan, Karisma Kapoor iyo Raveena Tandon.
Raveena waxay tiri iyadoo jawaabeysa,”waan jeclaan lahaa inaan markale atiriishada Andaz Apna Apna noqdo balde sheekada Filimka isbedel ayaa ku dhaceysa aniga iyo Karisma waxaa nalaga dhigaa xaasas geeriyodeen nimankeena (Aamir iyo Salman) iyagana waxay sii amba qaadayaan sheekada oo 21 jiryaal gabdho ah ayee daba ordayaan ileen xeerka maanta ayaaba sidaa ah.”
“Marnaba ma aaminsani in atiriishooyinkii hore waqtigaan filimada boos laga siinaayo ama la shaqeynayaan atoorayaashii hore si fudud atoorayaasha 50 jiryaalka ah waqtigaan ma jecla atiriishooyinkii ay isku jiilka ahaayen inee la shaqeyaan ee 21 jiryaal ayee daba ordaan.”
Manisha Koirala ayaa iyadana la weydiiyay fikirka Raveena inee ku waafaqsantahay waxayna tiri,” waa sax sida ay sheegtay Raveena balse mid ogaada atiriishooyinkii hore wax boos ah ama filim sameeyn ah waqtigaan xiiso uma qabaan ee noloshooda gaarka ah ayeeba ku mashquulsan yihiin.”
Ajay Devgn oo horey khilaaf ugala dhaxeeyay labadan atiriisho ayaa la weydiiyay waxa uu ka leeyahay fikirkooda maadama uu isaga koe ka yahay atoorayaasha 50 jiryaalka ah ee atiriishooyinka yaryar la shaqeeyo waxuu yiri isagoo Raveena weerar ku qaadaayo.
“Raveena waa habar duqowday markaan idinla kaftamo waxayna ka maseertay 21 jiryaalka atiriishooyinka ah ee aan anaga la shaqeyno hadii dhalinyarnimo lasoo celin karo qofka kowaad ee codsa laheed in loo soo celiyo waa Raveena.”
“Waa wax kama jiraan inaan diidnah la shaqeynta atiriishooyinkii hore aniga waxaan la shaqeya waqtigaan Juhi Chawla, Tabu, Madhuri Dixit iyo kuwa kale xitaa Kajol Filim ayaa lasoo wadaa marka waa sheeko iyo fikirkeeda waxay ku hadashay Raveena.”
“Mida kale atiriisho sideedaba waxaa lagu qaata qaab jiliin wacan kow inee leedahay, qurux soo jiidasho le iyo awood (Star Power) wax walbona sheekada filimka iyo kooxda Filimka dadkee rabaan ayee kuxirantahay marka Raveena hadii laga tagay micnaheeda waa intaas maleh.”
“Bal u fiirso Tabu waa atiriisho 45 sare u dhaaftay maantana 20 jir ayaa la mooda dhalaalka ka baxaayo filimsameyo walbo ayaa xiiseyo marka atiriishooyinkii hore waan la shaqeynaa waana la shaqeyn doonaa balse waa inta Filimsameyaha dalbado oo filim u dhiibto ileen filim asaa maamulo anaga xoog kuma lihin atiriishads uu doono ayaan qaadaneena inkastoo fikirka wax ku leenahay waqtigaan.”